मलेसियन रिंगिटको भाउ बढ्यो, अरु विदेशी मुद्राको भाउ कति ? - Rastra Ko News
मिती: माघ ५, २०७६
मलेसियन रिंगिटको भाउ बढ्यो, अरु विदेशी मुद्राको भाउ कति ?
भदौ २५, २०७६ / ०५:३१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । बुधबार मलेसियन रिंगिटको भाउ केही बढेको छ । अमेरिकी डलरसहित अरु विदेशी मुद्राको भाउ भने आज स्थिर छ । बुधबार नेपाल राष्ट्रबैंकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११४ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ ०३ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ११४ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ११५ रुपैयाँ ०३ पैसा थियो । साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ६७ पैसा पुुगेको छ । हिजो पनि साउदी रियाल १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ६७ पैसा नै थियो ।
कतारी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ५९ पैसा तोकेको छ । हिजो यसको खरिददर ३१ रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ५९ पैसा थियो । आज ओमानी रियाल १ को खरिददर २९८ रुपैयाँ ५३ पैसा छ । मंगलबार ओमानी रियाल १ को खरिददर २९६ रुपैयाँ ६० पैसा थियो । यूएई दिर्हाम १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ३२ पैसा छ । हिजो खरिददर ३१ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ३२ पैसा थियो ।
मलेसियन रिंगिटको भाउ केही बढेको छ । रिंगिट १ को खरिददर २७ रुपैयाँ ४३ पैसा बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ५७ पैसा पुगेको छ । हिजो पनि खरिददर २७ रुपैयाँ ३७ पैसा बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ५२ पैसा नै थियो । कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६५ पैसा पुगेको छ । हिजो पनि कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६५ पैसा नै रहेको थियो ।
आज कुवेती दिनार १ को खरिददर ३७६ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर ३७८ रुपैयाँ ४४ पैसा पुगेको छ । हिजो खरिददर ३७६ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ३७८ रुपैयाँ ५७ पैसा थियो । यस्तै बहराइन दिनार १ को खरिददर ३०३ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३०५ रुपैयाँ ०७ पैसा पुगेको छ । हिजो खरिददर ३०३ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३०५ रुपैयाँ ०७ पैसा थियो ।